साली माथि भेनाको एक करोड लगानी ! « Ramailo छ
साली माथि भेनाको एक करोड लगानी !
पछिल्लो समय नेपाली फिल्मको लगानी बढ्दै गैरहेको छ । यस्तैमा फिल्म ‘साली कस्को भेना’ को पनि महंगो बजेटमा निर्माण हुने भएको छ । यो फिल्मको लगानी एक करोड अनुमान गरिएको छ । भद्र भुजेलको निर्देशन रहने फिल्मको मंगलबार चितवनमा मुर्हत गरियो ।
मुभिङ पिक्चर्स प्रा.लि द्धारा निर्मित फिल्मको वरिष्ठ कलाकार रिद्धिचरण श्रेष्ठले क्ल्याप हानेर शुभ मुहुर्त गरे । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका पुर्व अध्यक्ष उत्तमलाल चुकेले क्यामराको स्विच अन गरे । लेखक पुष्प आचार्यले नरिवल फुटाए । निर्देशक भुजेलको निर्देशनमा फिल्मकी नायिका मरिष्का पोख्रेल र नायक देब सागर बि.सीले मुर्हुत सट दिए ।
निर्माता प्रसाद श्रेष्ठको प्रस्तुती रहने ‘साली कस्को भेनाको’ छायाँकन चितवन र धम्पुसमा गरिनेछ । पुष्प आचार्यको कथा रहेको फिल्ममा प्रसाद श्रेष्ठ, सुरज शाही ठकुरी र मिन घलानको संगीत छ । फिल्ममा विल्सन विक्रम राई, सुष्मा कार्की, मरिष्का पोख्रेल, रजनी गुरुङ, बुद्धि तामाङ (हैट), रबि गिरी, बिरेन श्रेष्ठ, प्रिया रिजाल, जयनन्द लामा, कविता आले, मिन घलान लगायतको अभिनय रहनेछ ।